ကချင် ခရစ်ယာန် အသင်းတော်များ - အမေရိကား၊ ဂျပန်၊ စင်ကာပူ
Nargis Fund Raising in San Francisco - Kachin Triditional Dancers on June 15, 2008 (Sunday)
ကချင်ပြည်ကို အမေရိကန်လူမျိုး ဆရာကြီး အိုလက်ဟက်ဆန် သာသနာပြုလို့ ခရစ်တော်ကို ကချင်လူမျိုး ၉၀ရာနှုံး လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ နှစ် ၁၀၀ ကျော်မှာ ဆရာကြီးရဲ့ ဒေသ အမေရိကန်၊ နီဘရာစကာပြည်နယ်၊ အိုမဟာမြို့မှာ ကချင်လူမျိုးများစွာ တကြော့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်အဖြစ် ကချင်လူမျိုးများ မြန်မာလိုသီဆိုထားတဲ့ ခရစ်စမတ်သီချင်းကလေးပါ။
ဆောင်းတွင်းမြူတွေကြားထဲ .. သီချင်းလေးသီဆိုရင်းနဲ့
မေတ္တာတွေအပြည့်နဲ့ ... ချစ်ကြင်နာကြမယ်..
Cho.. ဒီလိုခရစ်စမတ်အပင်ကလေးကို မေ့မယ်နော်
ယေရှုခရစ် ဖွားမြင်လာတာ ဒို့အတွက်လေ....
Christmas Gift from Kachin in Nebraska (41 Seconds .. Google Video)
ဆရာခွန်ဂမ် (Rev. Khun Gam ..Sermon, "Where to Live") တရားဒေသနာ၊
နေစရာအိမ် - ကျွန်တော်တို့ နေစရာဈေးကြီးလှတဲ့ အမေရိကားမှာ ထာဝရ နေစရာအိမ်တော်ကို ရှာဖွေနိုင်ဖို့ ခရစ်တော်ကြွဆင်းလာတဲ့ ခရစ်စမတ်ဒေသနာ 22.Dec.2008 Nebraska USA
East Bay Burmese Christian Fellowship, Concord, 3525, Chestnut Ave, Concord, CA 94519 အသင်းတော် အထိမ်းအမှတ် 501 (c) (3) California Public Charity ကိုးကွယ်ဝပ်ပြုခြင်း. 21Nov2008
Some San Francisco - Pastors from Kachin State (Left to Right)
1. Rev. Lone-Wah Lazum - Kachin Pastor, Oakland Burmese Mission Baptist Church, Oakland.
2. Burmese Pastor
3. Rev. Sammy Myo Sett.
4. Pastors from Kachin State Rev. Dr. Latt Yishey, First Burmese Baptist Church of San Francisco
5. Rev. Zauya Lahpai Burmese Christian Community Church of Silicon Valley, San Jose
6. A friend of Pastors
တိုကျိုမြို့မှာ ကချင် ခရစ်ယာန်များ
တိုကျို (ဂျပန်ပြည်) မှ ကချင် အသင်းတော် ၂ ပါး၊ (၂ဝဝ၆)
တိုကျိုမြို့မှာ ကချင် ခရစ်ယာန် အသင်းတော် ၂ ပါးရှိပါတယ်။ ကချင်လူမျိုးများဟာ ဂျပန်ပြည်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၁၈ နှစ်လောက်ကတည်းက အမြောက်အများ လာရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြရင်း ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသူများဖြစ်လို့ တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုရင် နီးစပ်ရာ ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်း တွေမှာ ဘုရားရှိခိုးကြပါတယ်။ ကချင်စကားနဲ့ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းကို စတင် လုပ်ဆောင်ရာမှာ တိုကျိုပိစ် ဘုရားကျောင်း (Tokyo Peace Church) က ဂျပန်လူမျိုး ခရစ်ယန်တရားဟောဆရာ “မာကိုတို ထားနို” Makoto Tannoဆိုသူက ကချင်လူမျိုးများကို အထူးချစ်ခင်၊ မြတ်နိုးပြီး၊ စတင် ပြုစု ပျိုးထောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ဘဲ တိုကျိုပိစ် ဘုရားကျောင်းမှာ ကချင်ဘာသာ ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခြင်း စတင်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။
ပထမစတင်တဲ့ ကချင်ဘုရားကျောင်းရဲ့ အမည်ကတော့ ကေစီအက်ဖ် (Kachin Christian Fellowship) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဆရာ မာကိုတို ထားနို စတင် ပြုစုပေးခဲ့တဲ့ ဘုရားကျောင်းပါ။ ကချင်ပြည်နယ်က တရားဟောဆရာများ တလှည့်စီ လာရောက်ဟောပြောကြပါတယ်။ ၂ဝဝ၆ မှာတော့ ဆရာ ဆဲမဆင် Rev. Hkalam Samson ရှိနေပါတယ်။ အသင်းသား ၂ဝဝ ကျော်ခန့် ရှိတယ် သိရပြီး၊ အပတ်စဉ် ၁ဝဝ ဦးခန့် လာရောက် ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုကြပါတယ်။ တရားဟောချက်များကို အင်တာနက်မှာ လွှင့်တင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဆက်သွယ်ရန်။ ဖုန်း ၆၁၃-၃၂ဝ၃၂၄၄၂
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်လောက်မှာတော့ ကချင်လူဦးရေ သိပ်များလာတာ ကြောင့်တကြောင်း၊ တခြားအကြောင်း အမျိုးမျိုးနဲ့ ကချင် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း အသစ်တခု ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ TKBC ( Tokyo Baptist Church) လို့ခေါ်ပြီး ဂျပန်ဘုရားကျောင်းတခုဆီမှာ ကချင် အစီအစဉ်နဲ့ ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုပါတယ်။ အသင်းသား တရာကျော် ခန့်ရှိပြီး အပတ်စဉ် ၆ဝ ဦးခန့် လာရောက် ရှိခိုကြပါတယ်။ တရားဟောချက်များကို အင်တာနက် ကွန်ပြူတာနဲ့ နားဆင်နိုင်အောင် အသံလွှင့်ပေးပါတယ်။ ၂ဝဝ၆ နှစ်ပိုင်းမှာ အင်တာနက် ဗွီဒီယို စတင်နိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ အပတ်စဉ် တရားဟောချက်ကို အင်တာနက် ဗွီဒီယို လွှင့်နိုင်တဲ့ TKBC အသင်းတော်ကို ချီးမွမ်းပါတယ်။
ဆက်သွယ်ရန်။ ဖုန်း ၆၁၃-၄ဝ၂၆၉၂၃၄Website: www.tkbc-japan.net
တူညီးသော ကိုကွယ် ဝတ်ပြုခြင်း နှင့် မိတ်သဟာရပြုခြင်း
အသင်းတော် ၂ပါးကို၊ ကချင်များသာမက မြန်မာတိုင်းရင်းသာများလည်း လာရောက် ဝတ်ပြုကြတော့ တလရဲ့ နောက်ဆုံး တပတ်ကို မြန်မာလို ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း အစီအစဉ်ကို မှန်မှန် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ကေစီအက်ဖ် မှာ ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခြင်း၊ သီဆိုချီးမွမ်းခြင်း၊ ဧဝံဂေလိ မိတ်သဟာရဖွဲ့ခြင်းများ အပြင် မြန်မာပြည်က ဆရာများစွာကို ဖိတ်ကြား၊ အလည်အပတ်ခေါ်ပါတယ်။ ဆရာများ ကချင်ပြည်ကို ပြန်သွားတဲ့ အခါမှာတော့ ကချင်လူမျိုးများကို ဂျပန်မှာ ကျိုးစားလုပ်ကိုင်၊ ဘုရားကို ရိုသေ၊ ကိုင်းရှိုင်းတဲ့ ကချင် ခရစ်ယာန် များအကြောင်းကို ဝေငှနိုင်စေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် အလှူငွေ များစွာကိုလည်း၊ ကချင်ပြည်က ဘုရားကျောင်းများသာမက၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ပညာရေး တွေအတွက် ပို့ပေး၊ ကူညီလျက်ရှိပါတယ်။ ဘုရားကျောင်းမှာတော့ ထုံးစံအတိုင်း ဘာသာရေးဆိုင်ရာ၊ အမျိုးသမီး အသင်း၊ လူငယ်အသင်း ရှိကြတဲ့ အပြင်၊ ကချင်စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု စတဲ့ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများလည်း အတူလုပ်ကိုင်ကြပါတယ်။
ဘုရားရှိခိုးမစင်ခင်မှာတော့ ထုံးစံအတိုင်း သီဆိုချီးမွမ်းကြရာမှာ ဂီတာ၊ အော်ဂျင်၊ ပီယာနို၊ ဒရမ် များနဲ့ ပျော်ရွင် သာယာဖွယ် ဓမ္မသီချင်းများကို ကျူးဧကြပါတယ်။ တရားဒေသနာ ဟောကြားပြီးတဲ့ အချိန်မှာတော့၊ လူသစ်မိတ်ဆွေများ မိတ်ဆက်စကားပြောခြင်း၊ ကြော်ငြာစရာများ ပြောကြားခြင်း ရှိပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ လာရောက်သူအားလုံးကို အကျွေးအမွေးနဲ့ ဧည့်ခံပြီး၊ အားလုံးပျော်ရွင်စွာ စကားစမြည်ပြောကြားရင်း၊ တနေ့တာကာလကို ကုန်ဆုံးစေကြပါတယ်။
ကချင် အသင်းတော် ၂ ခုစလုံးမှာ ဘာသာပြန် ဝါယာလက်စ် နားကျပ်များပေးပါတယ်။ ကချင်စကား မကြွမ်းကျင်သူ မြန်မာ၊ ကရင်၊ ရှမ်း၊ ချင်း စသည့် မြန်မာတိုင်းရင်းသားများအတွက် မြန်မာစကား အသံလွှင့်ပေးပါတယ်၊ ဂျပန်၊ အင်္ဂလိပ် စတဲ့ လူမျိုးတွေ တတ်ရောက်ရင်လည်း ဘာသာပြန်ပေးသူ ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်တဲ့ ကချင်လူမျိုးများ ဘာသာပြန်ပေးကြပါတယ်။ အိပ်ဆောင် အသံဖမ်းစက်ကလေးနဲ့ နားကြပ်ကို တပ်ဆင်လိုက်ရင်း၊ မြန်မာစကားပြန်ကို ကြားရပါတယ်။ ချယ်နယ် ၃ ခုပါတဲ့ အသံလွှင့်၊ အသံဖမ်း စက် ၁၅ စုံလောက်ကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁ဝဝဝ လောက်ကုန်ကျတယ်ပြောပါတယ်။ ပိုပြီး တန်ဖိုးကြီးတာကတော့ ဘာသာပြန်ပေးတဲ့ လူငယ်များရဲ့ ဘုရားအစေခံ ဘာသာပြန်လုပ်ငန်းပါ။
ကချင် နှစ်ခြင်း အသင်းတော် ၂ ပါးရှိနေခြင်းအတွက် အားသာချက်များနဲ့ အားနည်းချက် အနည်းငယ် ရှိနေစမြဲပါ။ လာရောက်သူများ ပိုမို ပေးလှူ လာနိုင်တာလည်းတွေရပါတယ်။ အသင်းတော် ၂ပါး ဆုတောင်းပေးခြင်း၊ အပြန်အလှန် ဖိတ်ကြား၊ တက်ရောက်ကြခြင်း မိတ်သဟာရပြုကြပါသည်။ ရထားစီးရင် ၅ မိနစ်လောက်ဘဲ ဝေးပါတယ်။ ကချင်ပြည်က တရားဟောဆရာ များသာမက၊ ရန်ကုန်၊ ဘန်ကောက် စတဲ့ နေရာများမှ ကချင်၊ မြန်မာ ဆရာများ ပိုမို ရောက်လာနိုင်ပြီး ၊ တရားဟောနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၂ဝဝ၆ သြဂုတ်လ အတွင်းမှာတော့ ဘန်ကောင် အမ်စီအေ က ဧည့်သည် ဆရာ Rev. လဇွန်တူးဂျာ၊ နယ်ခံဆရာများဖြစ်တဲ့ Rev. Maran Sing Gawng , Rev. Hkalam Samson, Rev. Yojong Yaw Han, Rev. Dr. Lazuk Dau Hkwwng စသည်တို့ ရှိနေကြပါတယ်။
နိုင်ငံတကာရောက် ကချင်များ၊ တဦးချင်း၊ မိသားစုချင်း၊ အသင်းတော်ချင်း၊ အမျိုးအနွယ်ချင်း၊ မိတ်သဟာရ ဖွဲ့၍ ဆောင်ရွက်ခြင်းကို အတွက် ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းပါသည်။
မှတ်ချက်။ ၂၀၀၆ - အေပီအမ်စီအက်ဖ် မှဆောင်းပါးကို ထပ်မံဖေါ်ပြပါသည်။ စင်ကာပူတွင်လည်း လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၅နှစ်ခန့်ကတည်းက ကမ်ဘာကမ် ကချင်နှစ်ခြင်းမိတ်သဟာရ BETHESDA CHAPEL တွင် ည၇နာရီမှ ၈နာရီခွဲအထိ ကချင်ဘာသာဖြင့် ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုကြပါသည်။ နောက်ဆုံးအပတ်တွင် မြန်မာဘာသာဖြင့် ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုကြပါသည်။ Scribd Document The End.. (Reposted - from JBC Singapore website)
27 Lorong Melayu, Singapore3 416913
(3 minutes walk from Kambagan MRT station) ကမ်ဘာဂမ် အမ်အာတီ ရထားဘူတာအနီး ၃မိနစ် လမ်းလျှောက်ခရီး..
Time: Sunday7to 8:30pm (Every last Sunday - Worship in Burmese Language) မြန်မာအစီအစဉ် .. လစဉ် နောက်ဆုံးအပတ် ည ၇နာရီ
Sat: Bible Study 8pm
ကချင် ယဉ်ကျေးမှုလက်ရှိသမိုင်းသုသေသနပြုစုခြင်း - Professor Stan (NUS - South East Asia Study)
Tuesday, 26 October 2010 03:35 မုရန်သတင်းဆောင်းပါး
ပါမောက္ခ ဒေါက်တာစတမ်သည် သြစတြေးလျားနိုင်ငံ National Australian University မှ Ph.D ရရှိခဲ့ပြီးနောက် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ မြို့ရွာ၊တောတောင်များတွင် သွားလာ၊အင်တာဗျူးက ဗီယက်နမ်ဆိုင်ရာ စာတမ်းများစွာ ပြုစုခဲ့သူဖြစ်သည်။ အသက် ၃၇နှစ်အရွယ်ရှိပြီး စင်ကာပူတက္ကသိုလ် NUS တွင် ဒေါက်တာဘွဲ့ ၄နှစ် ဆည်းပူးခဲ့ပြီး Research Fellow , USA အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဒေါက်တာကွမ်ဂျာ နှင့်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေဖြစ်ပါသည်။ ဒေါက်တာကွမ်ဂျာသည် ကချင်လူမျိုးဖြစ်ပြီး သူနှင့်ဇနီးသည်တို့မှာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရရှိပြီး M.I.T မန္တလေးစက်မှုတက္ကသိုလ်ဆရာတွင် ကျောင်းဆရာအဖြစ် နှစ်အတန်ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး စင်ကာပူတွင် နေထိုင်ကြပါသည်။ သူ့မိတ်ဆွေ Professor Stan သည် ကချင်လူမျိုးများကို စိတ်ဝင်စားကာ သုတေသနပြုလုပ်ရန် ယခုကဲ့သို့ သင်တန်းငယ်တစ်ခုကို ကချင်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် စတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သူ၏ လက်ရှိသင်ကြားသောနည်းစနစ်မှာ ယခု သင်တန်းသား ၄၀ ကို တစ်ဦးစီ မိနစ်၂၀ခန့် အင်တာဗျူးပြောဆိုချက်များကို စာဖြင့်ပြန်ရေးပါက စာမျက်နှာ ၄၀၀၀ ခန့် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထိုရရှိသော အင်တာဗျူးပြောဆိုချက်များမှ မလိုသည်ကို ထုတ်ပယ်ကာ ကချင်ယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းနှင့်ဆိုင်သော အချက်များကို Excel Format နည်းစနစ်ဖြင့် စီစစ်၊သီးသန့်ထုတ်လိုက်ပါက စာမျက်နှာ အနည်းငယ်မျှဖြင့် တိုရင်း၊လိုရှင်း အကယ်ဒမစ်ပုံစံ သုတေသနစာစောင်တစ်ခုကို ရရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ သုတေသနနည်းစနစ်ကို မြန်မာနိုင်ငံအတွက် စနစ်တကျ မိမိတစ်ဦးတည်းလုပ်ပါက ၁၀နှစ်မျှ ကြာကောင်းကြာမည်ဖြစ်သည်။ ယခု တက်ရောက်လာသူ ကချင်လူငယ်များ စုပေါင်းပြုလုပ်ပါက လက်ရှိကချင်ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အတိတ်ဖြစ်ရပ်သမိုင်း စာတမ်းကို ကချင်လူမျိုးများကိုယ်တိုင် ပြုစုနိုင်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်ပို့ချကြောင်းသိရပါသည်။
သင်တန်း နေရာ Bethesda Chapel, 27 Lorong Melayu -3min walk from Kambagan MRT
အချိန်။ Every Saturday ( 6:00 pm, 23,30.oct and 6,13.20,27 Nov 2010) at Bethesda Chapel.
In this seminar Prof. Stan will teach us about the unique method for capturing the real situation (such as environmental issue, political, history, so on .....) from the individual personal life story. This method has been applied by Prof. Stan in Vietnam to study the hill Vietnamese people. He wrotealot of booksabout the Vietnamese people.
Here are the NUS website about our Kachin People.
http://web.me.com/cecstantankoh/KBHP/SE5294/SE5294.html short postings done by students)
http://web.me.com/cecstantankoh/KBHP/Features/Features.html (excerpts of research pieces or work in progress)
http://burmesebible.com/kachin/kcf_singapore.htm ကချင်နှစ်ခြင်းမိတ်သဟာရ (စင်ကာပူ)
Seminar speaker Prof. Dr. Stan (3rd from left), his wife Sisilia,
Organizer- Dr. Kum Ja (2nd from right)
Kachin Beauties from BBC Photo